Booliska: Ninkii London dadka ku laayey xidhiidh lama la lahayn ISIS - BBC News Somali
Booliska: Ninkii London dadka ku laayey xidhiidh lama la lahayn ISIS
27 Maarso 2017
Image caption Sawirada Khalid Masood ee haatan iyo markuu yaraa
Booliska Ingiriiska ayaa sheegay in aanay hayn cadeyn la xidhiidhinaysa ninkii afarta qof ku diley badhtamaha magaalada London todobaadkii aynu soo dhaafney kooxda la baxdey Dawladda Islaamka ama ururka Al-qaacida.
Waxa se ay sheegeen in uu Khalid Masood xiise u qabay jihaadka.
Neil Basu oo ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa beeniyey warar la isla dhex marayey oo sheegayey in Khalid Masood lagu duufsaday xabsiga dhexdiisa mar uu xidhaa sannadkii 2003-dii. Waxaanu sheegay in habka uu ninkani weerarka u qaaday ee aha gaadhi dad la jiidhsiiyo iyo toori lala dhacaa yahay "farsamo aan xirfad badani ka muuqan oo aan aad loogu fikirin".
Saraakiisha baadhaya weerarkan ayaa laba qof oo reer Birmingham xidhay kuwaas oo ay ku tuhmeen in ay maleegayeen falal argagixisonimo ah.
Ilaa haatan sagaal qof ayaa la sii daayey markii wax dambi ah lagu waayey in kasta oo haweeney 32 jir ah oo lagu xidhay Manchester ay weli dammaanad dibadda ku joogi doonto ilaa dabayaaqada bishan Maarij.